Mgbe Harry ghọrọ Sally - Ryan T Anderson | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Mgbe Harry ghọrọ Sally - Ryan T Anderson
Nwatakịrị nwoke nwere ike ị “zọrọ” n’ahụ nwa agbọghọ? Ogwu ogbara ohuru nwere ike 'reass' nmekorita nwoke na nwoke? “Inye anyị” mmekọahụ nwoke na nwanyị na mbụ? Kedu mmeghachi omume ịhụnanya kachasị mma nye onye na-enwe echiche dị iche iche maka nwoke na nwanyị? Gini ka iwu anyi kwuru n’okwu gbasara “njirimara nwoke”?
Mgbe Harry ghọrọ Sally na-enye azịza ajụjụ dị mma maka ajụjụ na-ebilite n'oge transgender anyị. N’ịghọta nghọta kachasị mma sitere na bayoloji, akparamaagwa, na teknụzụ, Ryan Anderson na-enye echiche hiere ụzọ banyere mmadụ, ụzọ ziri ezi maka amụma ọha na eze banyere njirimara nwoke na nwanyị, na nyocha nke echiche mmadụ maka inweta ọdịdị mmadụ na-ezighi ezi.
Zụta Mgbe Harry ghọrọ Sally si Amazon Ebe a.
Akwụkwọ a na-ekpughere ọdịiche dị n’etiti ihe atụ nke anwụrụ ọkụ nke mgbasa ozi gbasara nwoke na nwanyị na ihe na-ewute ewute nke ibi na dysphoria okike. Ọ na - enye ndị mmadụ nwara 'ịgagharị' site n'ịgbanwe ahụ ha, na ahụghị onwe ha nke ọma. Akụkọ na - enye nsogbu bụ akụkọ nke ndị okenye gwara agbam ume ka ha bụrụ ụmụaka ma mesịa kwaa ụta maka itinye onwe ha n'okpuru usoro ọjọọ ahụ.
Dika Anderson gosiri, usoro ọgwụgwọ kachasị bara uru na-elekwasị anya n'inyere ndị mmadụ aka ịnabata onwe ha ma na-ebi ndụ kwekọrọ na ahụ ha. Nghọta a dị ezigbo mkpa maka nne na nna nwere ụmụ n’ụlọ akwụkwọ ebe ndị ndụmọdụ nwere ike iduga nwatakịrị n’ịgbagharị n’azụ ha.
Onye ọ bụla nwere ihe ọ bụla nọ na esemokwu banyere echiche transgender, mgbe atumatu na-ezighi ezi "ịkpa oke ịkpa ókè" na-enye ụmụ nwoke ndu n'ime ụlọ mposi ụmụ nwanyị ma taa ndị America ahụhụ nke jidere eziokwu banyere ọdịdị mmadụ. Anderson na-enye usoro maka ịlaghachi azụ na ụkpụrụ na akọ, ọmịiko na amara.